नेपाल लाइभ बिहीबार, असोज १, २०७७, २०:४९
काठमाडौं- सानिमा बैंकले ताप्लेजुङ्ग र कोहलपुरमा आफ्नो ८१ औं र ८२ औ शाखा कार्यालय स्थापना गरेको छ।
ताप्लेजुङ्ग जिल्ला, फुङलिङ्ग नगरपालिका ५ स्थित ताप्लेजुङ्ग शाखाको उद्घाटन फुङलिङ्ग नगरपालिकाका मेयर क्षेत्रपति प्याकुरेल र ताप्लेजुङ्ग जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जरेन्द्र चापागाईंले संयुक्त रुपमा गरेका हुन्।
यसैगरी बाँके जिल्ला, कोहलपुर नगरपालिका–११ एन.टि.भि. रोडस्थित कोहलपुर शाखाको उद्घाटन कोहलपुर नगरपालिकाका मेयर लुट बहादुर राउत र कोहलपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष चक्र बहादुर अधिकारीले संयुक्त रुपमा गरेका हुन्।
दुवै शाखाहरु संचालनमा आएसँगै सो क्षेत्रका बासिन्दाहरुलाई गुणस्तरीय बैंकिङ्ग सेवामा सहज पहुँच हुने विश्वास बैंकले लिएको छ। सानिमा बैंकले हाल ८२ वटा शाखा कार्यालय, १५ विस्तारित काउन्टर र ८१ वटा ए.टि.एम. मार्फत बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ।